Shariif Sakiin Oo Ku Cataabay in Haddii Ciidamada AMISOM Soomaaliya Ka Baxaan Ay Ku Burburi doonaan Maamul Goboleedyada.
Tuesday December 05, 2017 - 07:36:35 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaha maamulka dabadhilifka ee isku magacaabay Koonfur Galbeed ayaa sheegay in haddii ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiya ka baxaan Soomaaliya loo baqayo sii jiritaanka maamul goboleedyada dalka kajira.
Shariif Sakiin oo khudbad ka jeedinayay shir shalay ka furmay xerada Xalane oo looga hadlayay arrimaha ammaanka iyo mustaqbalka DF-ka kadib bixitaanka AMISOM ayaa muujiyay sida maamulkiisu uusan u awoodin sii heysashada magaalooyin haddii ciidamada shisheeye baxaan.
Wuxuu carrabaabay in maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka aysan heysan ciidamo awood leh oo ammaanka hanan kara sidaas daraadeed loo baahaynayahay in AMISOM Soomaalida sii gumeysato "anigu waxaan aaminsanahay in aan lagaarin waqtigii AMISOM dalka ka bixi laheyd"ayuu yiri Shariif Sakiin.
Hoggaamiyahan ay ku fogtahay dabadhilifnimada ayaa ku cataabay in Al Shabaab ay heysato waddooyin halbowlayaal ah sida wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo oo Shabaabul Mujaahidiin ka maamusho deegaanka Leego oo bishii Agoosto 2017 ay isaga baxeen ciidamada shisheeyaha AMISOM.
Kulanka ka socda xerada Xalane oo daba socda shirkii London ee dhacay Bishii May 2017 ayaa la rumeysanyahay in noqon doono midkii ugu dambeeyay ee laqabto ka hor inta aysan AMISOM bilaabin bixitaanka horudhaca ah bisha December ee dhammaadka sanadkan.